पटकको ६ हजारका दरले १२ हजार रियाल (२ लाख ४० हजार रुपैयाँ) को बिल | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
पटकको ६ हजारका दरले १२ हजार रियाल (२ लाख ४० हजार रुपैयाँ) को बिल
Posted on फ्रेवुअरी 8, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी
कतारबाट सिक्ने कुरा
तनहुँका टुकनाथ अधिकारीले १३ मिनेटमा दुईपटक रातो बत्तीमा गाडी कटाए । भोलिपल्टै उनलाई पटकको ६ हजारका दरले १२ हजार रियाल (२ लाख ४० हजार रुपैयाँ) को बिल आयो । पैसा कमाउन प्रवास पसेका उनले खेलाँचीमै यत्रो जरिवाना तिर्नुपर्‍यो । उनका लागि यो ठूलो भार भए पनि कतारमा यस्ता घटना सामान्य मानिन्छन् । सडकमा गाडी लिएर हिँड्ने को कति बेला कति जरिवानामा पर्छ, उसैलाई थाहा हुँदैन । त्यो मात्र जोगिन्छ जसले सवारी नियम पूरा पालना गर्छ । कतारमा धूलो-धूवाँ खाँदै ट्राफिक प्रहरी बाटो ढुकेका देखिँदैनन् । तैपनि चालक नियममा बाँधिनैपर्छ । कारण के भने- जरिवाना कडा छ ! र, त्यसलाई हेर्न सडक किनारमा छोटोछोटो दूरीमा क्यामेरा राखिएका हुन्छन् ।
यस्तै नियम मिच्दा नेपालमा ५० देखि दुई सय रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ । नियम उल्लंघन गर्ने सवारीचालक ट्राफिकको सिठी छल्दै भाग्यो भने त्यो पनि जोगिन्छ । उस्तै ट्राफिक रहेछ र २०-३० रुपैयाँ खल्तीमा हालिदियो भने कुरै सकिन्छ । हो त्यही भएर हाम्रो सडकमा अराजकता छ । नियम मिच्ने, अपराध गर्ने, तोडफोड मच्चाउने, अवरोध पुर्‍याउने सबैका लागि सजिलो ठाउँ सडक बनेको छ ।
हाम्रो देशमा दुईथरी जनता छन्- हुने खाने र हुँदा खाने । हुने खानेको दादागिरीले हुँदा खाने भोकभोकै छन् । राज्य जनताप्रति जिम्मेवार छैन । सरकार देशप्रति गम्भीर छैन । राज्यले ऋणमा डुबेर बनाएका सुविधा पनि सर्वासाधारणले निर्वाध प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
अहँ, कतारमा त्यस्तो छैन । अर्कालाई बाधा पर्ने हरेक काम यहाँ निषेधित छ । यहाँको चार किल्लामा बस्ने र पस्ने हरेकले कडा अनुशासनमा रहनुपर्छ । केही वर्षअघि ३ जना नेपाली कलाकार राति सडकमा फिटान भएको अवस्थामा प्रहरी फन्दामा परे । नाम चलेका ती कलाकार करिब एक साता खोरमा थुनिए । तत्कालीन राजदूतको कूटनीतिक पहलले उनीहरू केही जरिवाना तिरेर जेलमुक्त भए ।
कलाकार नभएको र राजदूतले पहल नगरेको भए उनीहरूलाई कम्तीमा प्रतिव्यक्ति १० हजार रियाल जरिवाना र २ वर्ष कैद हुन्थ्यो । प्रतिष्ठित कलाकार भनेर कतार सरकारले सम्झौता गर्‍यो र उनीहरूको इज्जत जोगियो । नेपालजस्तो दारु खाएर मनपरी गर्न अन्यत्र कहाँ पाइन्छ ? जहाँ गए पनि जात जनाउन कहाँ मिल्छ ? हामी प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा पुग्यौं । यी सबै स्वतन्त्रताका चरण हुन् । अब हामी स्वतन्त्रताको यस्तो चरामोत्कर्षमा पुग्यौं कि यसपछि कोहीसँग केही माग्ने ठाउँ छैन । तर, त्यसले हामीलाई संस्कार दिन सकेको छैन । अर्कालाई सम्मान गर्न सिकाएको छैन । आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा अर्कालाई धक्का लागे पनि हामी ‘लोकतान्त्रिक माफी’ पाइरहेका छौं । जघन्य अपराधलाई पनि राजनीतिक शक्तिका आडमा सफाइ दिइरहेका छौं ।
कतारमा बन्द-हडताल गर्नासाथ प्रहरी खोरमा पुगिहाल्छ । सडकमा कसैले अनावश्यक उभिनै पाउँदैन । उद्योग धन्दामा श्रमिक र व्यवस्थापनका समस्या छलफल वा कानुनी रूपमा मिलाउनुपर्छ । हडताललाई कानुनले रोकेको छ । काम हुनुपर्छ, दाम दिनुपर्छ ।
हामीकहाँ ठीक उल्टो छ । बन्द र हडताल गरेन भने लोकतान्त्रिक अभ्यास नै पूर्ण हुँदैन ! हामीले स्वतन्त्रता चिन्न सकेको छैनौं । अराजकतालाई स्वतन्त्रता भनेर छुट पाइरहेका छौं । स्वतन्त्रतालाई बन्द र हडताल ठानिरहेका छौं । भएका कलकारखाना बन्द गराएर खाडी छिरिरहेका छौं । आयोजनाहरू चल्न दिएका छैनौं । सडकको प्रयोग टायर बाल्न र लाठी हल्लाउन गरिरहेका छौं । अनि, हामी गरिब नभए के हुने त ?
कतारमा तेल र ग्यासबाहेक केही छैन । उसले मरुभूमिमा सुन फलाइरहेको छ । हाम्रै साढे ३ लाख नागरिकलाई रोजगार दिएको छ । हामी भने सुन्दर, शान्त र प्रचुर सम्भावना भएको देशलाई कथित स्वतन्त्रताका नाममा आगो झोसिरहेका छौं । गर्न सक्दा हाम्रो देशमा के हुँदैन ? कतार तेल बेचेर धनी भएको छ, हामी पानी बगाएर गरिब भइरहेका छौं । पानी नै पानी भएको देशलाई अँध्यारोमा डुबाएका
छौं । खोला र नदीबाट पानी बगेर गएको छ । किसानका खेत-बारीमा धाँजा फाटेका छन् । हामी आकासतिर हेर्दै थाप्लामा हात राखिरहेका छौं ।
मरुभूमि र गर्मीमा आएर हामी कतार बनाइदिइरहेका छौं तर प्राकृतिक ‘एयर कन्डिसन’ भएको आफ्नो मातृभूमि बनाउन सकेका छैनौं । किनकि हामीलाई विकास, काम र उन्नतिभन्दा नाराजुलुस, बन्द-हडताल र झैंझगडा गर्दै ठिक्क छ । आफ्नो बारीमा काम गर्न लाज हुन्छ । नेताका पछि लागेर सडकमा टायर बाल्नुलाई इज्जत मानिरहेका छौं ।
हो, हामी स्वतन्त्रता साँच्चै दुरुपयोग गरिरहेका छौं । त्यसैले पछि परेका छौं । लोकतन्त्र त्यो हो जहाँ जनताले जनतालाई गर्ने जनताकै शासन हुन्छ । तर हामी नेताले जनतालाई गरिरहेको शासनलाई लोकतन्त्र भनिरहेका छौं । नेताले बन्द भन्नेबित्तिकै देश ठप्प हुन्छ । नेताले हात झिक भन्नासाथ कलकारखाना बन्द हुन्छन् । जनताका लागि राजनीति गरेको हो भने जनतालाई किन दुःख दिन्छौं ? जनतालाई किन दुरुपयोग गर्छौ ? कतारको नियन्त्रित शासनमा अनुशासन देख्दा लाग्छ- हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास त थुइया ! जनतालाई सधैं दुःख दिनु केको लोकतन्त्र ? बन्दमा अस्पताल जान नपाई सडकमा बिरामी फत्र्याकफत्र्याक पर्नु केको लोकतन्त्र ? रोजीरोटीको काममा हिँडेको मान्छेको बाटोमा मोटरसाइकल जलाइदिनु केको लोकतन्त्र ? वास्तविक लोकतन्त्र हेर्न त कतार आउनुपर्ने रहेछ !
« एनआरएनको सहायोगमा दूतावासमा नागरिक कर्मचारी जमिम शाह हत्या’bout भारतीय मिडियाको प्रतिक्रिया »